Al-shabaab oo magaalada Xaradheere kusoo bandhigtay nabadoon caan ah – Bulshoweyn Online | Your Source Of News And Entertainment
Al-shabaab oo magaalada Xaradheere kusoo bandhigtay nabadoon caan ah
Wararka naga soo gaaraya magaalada Xaradheere ee gobolka Mudug ayaa sheegaya in Xarakada Al-shabaab ay halkaasi kusoo bandhigeen Oday dhaqameed caan ah oo iyaga isku soo dhiibay, kaas oo lagu magacaabo Maxamuud Cali Barre.
Oday dhaqameedkaan oo warbaahinta kula hadlay goobta lagu soo bandhigay ayaa sheegay inuu ka yimid magaalada Cadaado ee gobolka Galduud, halkaas oo uu lasoo shaqeeyay maamul goboleedka Galmudug iyo dowladda federaalka Soomaaliya.
Wuxuu nabadoonkaan si aad ah u dhaliilay dhaqanada uu sheegay inay ku kacayaan maamulkaasi iyo dowladda federaalka Soomaaliya, kaas oo uu ku tilmaamay mid ka hor-imaanaya diinta Islaamka, waa sida uu hadalka u dhigaye.
Nabadoonka ayaa sidaas darteed sheegay inuu go’aan ku gaaray inuu gebi ahaan isaga soo baxo halkaas, islamarkaana uu kusoo biiro Xarakada Al-shabaab.
Si kastaba ha ahaatee, ma ahan markii ugu horeeysay oo ay Al-shabaab soo bandhigaan Oday dhaqameed usoo goostay dhinacooda, waxayna oday dhaqameedyadaasi inta badan sheegaan inay u adkeysan waayeen dhaqamada ay ku kacayaan dowladda federaalka Soomaaliya.